कम्पनी ऐन संशोधनमा स्वामित्व लिनेलाई प्रश्न | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार कम्पनी ऐन संशोधनमा स्वामित्व लिनेलाई प्रश्न
on: August 27, 2017 पाठक विचार
कम्पनी ऐन संशोधनमा स्वामित्व लिनेलाई प्रश्न
‘अभियान राष्ट्रिय दैनिक’को सोमवारको अङ्कमा ‘कम्पनी खारेजीका झन्झटिला पक्ष’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित भएको रहेछ । कम्पनी ऐन २०६३ संशोधनको प्रक्रिया शुरू भएदेखि नै आमसञ्चारमा चाहिँदोभन्दा बढी नै समाचार सम्पे्रषण गरियो । यतिसम्म कि छुमन्तरमै कम्पनी खारेज हुने पो हो कि जस्तो पारियो । ऐन संशोधनका बेला खोरेजीबाहेकका अरू पनि धेरै विषयहरूलाई मिडियामा कभरेज गरियो । ऐन संशोधनमा तत्कालीन उद्योग मन्त्रीले व्यक्तिगत जस लिन खोजेको भान आम जनसमूहमा पर्ने गरी प्रचारप्रसार पनि गरियो । संशोधन गर्नुपूर्व कानूनको सामान्य जानकारीसम्म नभएका रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीबाट रायसुझाव मागियो । विज्ञको रायसुझावतर्फ कुनै वास्ता गरिएन ।
सरकारले न्याय क्षेत्रको व्यक्तिलाई तालीम दिएर मात्र पनि रजिष्ट्रारमा पठाउन आवश्यक ठान्दैन भने अन्य कर्मचारीको त कुरै छाडौं । अन्य क्षेत्रका त्यस्ता कर्मचारीले ऐनको मर्म के बुझून् ! त्यस कार्यालयको हविगत बिगार्नमा सरकारको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण छ । विनादरबन्दी र विनाहाजिरी रजिष्ट्रार भई काम गर्न पाउने यो कार्यालयका अधिकारीको आचरण र सरकारी पक्षको पक्षपोषण अति निकृष्ट छ । अर्कातिर उक्त कार्यालयमा लाग्ने कुम्भ मेलाले व्यावसायिक व्यक्तिलाई उपस्थित हुन पनि लाजमर्दो बनाएको छ । कम्पनी ऐनमा अधिकांश दफा संशोेधन हुन र प्रशासनिक कार्यमा सुधारको खाँचो छ । कम्पनी खारेजीको सवालमा अहिले गरिएकोे संशोधन भुमरीजस्तो मात्र लाग्छ । अन्य कुरालाई छोडेर खारेजीको सवालमात्र यहाँ सान्दर्भिक भएकाले ऐन संशोधनमा स्वामित्व लिनेलाई निम्न प्रश्न छ :
(१) कम्पनी ऐनको दफा १३६(१)(ख),(२),(३)मा कार्यालयले कम्पनी दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था अद्यावधि छ । ऐन लागू भएको १२ वर्षसम्म उक्त दफा लागू गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयले लिँदैन, सरकारले निर्देशन पनि गर्दैन । उक्त व्यवस्था लागू गर्न कसले छेकेको छ ? खारेज गर्नुअगाडि र खारेजीपछि कार्यालयले गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया दफा १३६ का विभिन्न उपदफामा उल्लेख छ । यसअनुसार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफै कम्पनी खारेज गर्न सक्छ । यसविपरीत कार्यालयले उक्त कामको जिम्मेवारी किन लिँदैन ? कुरा स्पष्ट छ उक्त व्यवस्था लागू भएमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको दर्ता खारेज गर्ने फाँटमा शुभलाभ मिल्दैन, काम मात्र गर्नुपर्छ ।
अर्कातिर दर्ता खारेज हुन चाहने कम्पनीले इमेल दर्ता गरी अनलाइन काजजात विवरण बुझाएपछि पनि कम्पनीका संस्थापकले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्वयम् उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा निर्देशिकामा छ । दफा १६ बमोजिम कम्पनीको प्रशासन गर्ने कामका लागि रजिष्ट्रारले निर्देशिका बनाइ लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारीको हितअनुकूल छ कि छैन ? यसमा उपस्थित भई सनाखत गर्न नसक्ने अवस्थामा हुने मोलाहिजालाई कसरी निरुत्साहित हुन्छ ? यस विषयमा थप के सोच छ ?
(२) अहिलेको १३६(क)मा जरीवानामा केही रकम छूट दिने गरी संशोधन भए पनि उक्त व्यवस्थाको अस्पष्टताका कारण यतिका दिनसम्म उक्त संशोधित दफा लागू हुन सकेको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ लागू हुँदाका बखत विवरण नबुझाई छुट्न गएका कम्पनीको मात्र खारेज गर्न सहज बनाइएको ढ्वाङ फुक्नुको के अर्थ छ ? अरू कम्पनीको खारेजीमा सहजता नखोज्नुका कारण के हो ? कानून संशोधन भनेको सरलत र स्पष्टता हो कि अझ अन्योल सृजना गर्ने हो ?
(३) मौजुदा ऐनको दफा १३६ को व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको दर्ता खारेज कार्यालय आफैले गर्ने हो । दफा १३६ मा भएको व्यवस्था अहिलेसम्म किन लागू गरिएन ? त्यसरी लागू गर्न कुन कानूनले छेकेको छ ? भएको व्यवस्थाका बारेमा केही नगरी अहिले १३६ (क) किन थप गर्नुपर्‍यो ? कम्पनी दर्ता खारेज गर्ने अवस्थामा दफा ८१ लगाएर जरीवाना गरिन्छ । जबकि दफा १३६ मा खारेजी दस्तुर लाग्ने र दफा ८१ मा खारेजीमा आएका कम्पनीलाई थप जरीवाना लाग्ने उल्लेख छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जरीवाना तिराएर मात्र खारेज गर्ने गरेको कानूनविपरीत छ । त्यस्तो थप जरीवाना लाग्ने व्यवस्था छैन । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म विवरण नबुझाएमा वा जरीवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज हुने कानूनी व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै अहिले दफा १३६(क) थप गरेर २ वर्षको हदम्याद राख्नुको कुनै अर्थ छैन ।